Waa maxay salaadaha sunnada ah? | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Salaadda Muslimka/Waa maxay salaadaha sunnada ah?
Waa maxay salaadaha sunnada ah?
Waxaa ku waajib ah qof kastoo Muslim ah maalin iyo habeen kasta shan salaadood oo keliya.
Sidaa oy tahay sharciga wuxuu ku dhiirra geliyey sidoo kale qofka Muslimka ah inuu tukado salaado sunno ah, waayo waa sabab uu ku muto addoonka maxabbada Ilaahay, waxayna kabtaa waxa ka naaqusa faraa’ilka.
Salaadaha nawaafisha ah way badan yihiin, waxaase ugu muhimsan:
Sunnooyinka Rawaatibta ah: Waxaana loogu bixiyey magacaa waayo waxay laasuntaa faraa’ilka, oo ku xiriirsan tahay, iyo inuu Muslimka daa’ima darteed.
Nabigu  wuxuu yiri: “Ma jiro addoon Muslim ah oo u tukado Allaah maalin kasta labo iyo toban rakcadood oo iskiis ah aan faral ahayn aan Ilaahay uga dhisin guri Jannada gudaheeda” (Muslim 728)
Waana sida soo socota:
1- Labo Rakcadood salaadda fajarka ka hor.
2- Afar rakcadood salaadda Duhur ka hor, uu salaamo naqsanayo kaddib labo rakco kasta, kaddibna labo rakcadood duhurka kaddib.
3- Labo rakcadood maqribka kaddidb.
4- Labo rakcadood Cishaha kaddib.
Waxaana loogu bixiyey salaaddan witir, waayo tirada rakcadaheeda waa rakcado is dheer aan dhaban ahayn, waana salaadda ugu fiican salaadaha sunnada ah, Nabigu  wuxuu yiri: “Tukada witirka ehlu Qur’aankow” (At-Tirmidi 453, Ibnu Maajah 1170)
Waxaana ugu wanaagsan waqtigeeda aakhiru leylka, waxaana u bannaan qofka Muslimka ah inuu tukado waqtiguu doono salaadda cishaha kaddidb ilaa ka hor waaberiga.
Tirada rakcadaheeda ma leh xad, waxaa ugu yar hal rakcad,waxaa fiican seddex rakcadood, wuuna badin karaa intuu doono, Nabigu  wuxuu tukan jirey kow iyo toban rakcadood.
Asal ahaan rakcadaha salaadda sunnada waa inay ahaato rakcado labo labo ah, marka waa inuu tukado labo rakcadood markaas salaama naqsada, oo sidaas ku wado, salaadda witirkana waa isla sidaas, laakiinse marka uu doonayo inuu soo gabagabeeyo salaaddiisa wuxuu tukanayaa hal rakcad dhammaadka, waxaa ugu bannaan marka uu ka soo kaco rukuuca kaddib iyo ka hor inta uusan sujuudin inuu la yimaado wardiga soo arooray kaddib wuxuu kor u taagayaa labadiisa gacmood oo Allaah ka barayayaa waxa uu doonayo, waxaana loo yaqaan ducada qunuudka.
Nabigu  wuxuu qunuudayey rakuuca dambe kaddib ee salaadda fajar bil kaamil ah isagoo habaarayey qabaa’il dhibay Muslimiinta.
Salaadda roob doonka
Waa salaad uu uu jideeyey Allaah hadduu dhulku abooroobo oo dadku dhib soo gaaro roob yari darteed, waxaana lagu gudan karaa fagaarooyinka iyo meelaha furan hadday suura gasho, wayna bannaan tahay in lagu tukado masjidka.
Waxaa la jideeyey inay baxaan dadka tukanaya iyagoo khushuucsan u hoganaya Allaah toobad keen ah, oo la yimid asbaabta keenta naxariista Ilaahay sida dambi dhaafka dalabka, siinta dadka xuquuqdooda, sadaqada, axsaan falka, iwm.
Sida loo tukado:
Salaadda roob doonka waa sida salaadda ciidda labo rakcadood oo iimaamku kor u qaado akhrinta, waxaana bannaan in la ziyaadiyo takbiirta billowga rakcad walba, wuxuu takbiiranayaa rakcadaa koowaad ka hor akhrinta lix takbiiradood aan ku jirin takbiirada ixraamka ee lagu xirto salaadda oo toddobo ku ah, wuxuu takbiiranayaa midda labaad shan takbiiradood aan ku jirin takbiirada looga soo kaco sujuudda oo lix ku ah.
Wuxuu khudbeynayaa kaddib salaadda labo khudbadood oo ku badinayo dambi dhaaf dalabka iyo Alle bariga.
Salaadda roob doonka oo lagu tukanaya aagagga masjidka Nabiga.
Salaadda istikhaarada ( Alle ka baryid ku toosin labo talo tii roon)
Waa salaadda u bannaan inuu tukado qofka Muslimka ah markuu ku hammiyo arrin uusan garaneyn ma u khayr baa mise maya, waxaa fiican markaa inuu tukado labo rakcadood aan faral ahayn, uu ku duceysanayo labadaa rakcadood kaddib ducada soo aroodhay uu baray Nabiga 
Saxaabadiisa, waxaana weeye “Allaahumma innii astakhiiruk bicilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as’aluka min fadlikal cadiim, fa innaka taqdiru walaa aqdir, wa taclamu walaa aclam, wa anta callaamul quyyuub, Allaaumma in kunta taclamu anna haadal amra – waa inuu sheego muraadkiisa – khayrun lii fii diinii wamacaashii waacaaqibata amrii faqdurhu lii wayasirhu lii, thumma baarik lii fiihi, wa in kunta taclamu anna haadal amra sharrun lii fii diinii wamcaashii wa caaqibta amrii caajilahu wa aajilahu fasrufhu canni wasrifnii canhu, waqdur lii alkhayra xaythu kaana thumma ardinii bihi” (Al-Bukhaari 1162).
Maxaa ka fiican inuu qofku ka dalbo Rabbigi inuu waafajiyo waxa ku jira khayrka adduunkiisa iyo aakhiradiisa.
Waana salaad ka mid ah salaadaha sunnada ah uu ku soo arooray fadligeeda ajar weyn waxaana ugu yar labo rakcadood waqtigeeduna waa markay kor noqoto qorraxda kaddib soo bixiddeeda waran in le’eg ilaa ka hor wax yar cadceed wareegga iyo soo gelitaanka waqtiga salaadd duhur.
Salaadda qorrax iyo dayax madoobaadka
Qorrax madoobaadka waa xaalad iyo dhacdo aan caadi ahayn uu ku qarsoomo iftiinka qorraxda iyo dayaxa oo dhan ama qaarki, waana calaamo ka mid ah calaamooyinka Ilaahay ee muujinaya awooddiisa iyo boqortooyadiisa oo ku baraarujineysa aadmiga oo ka kicineysa maahsanaantiisa si uu uga baqo cadaabka Ilaahay oo u rajeeyo abaal gudkiisa.
Nabigu  wuxuu yiri: “Hubaal qorraxda iyo dayaxa uma madoobaadaan dhimashada qofna ka mid ah dadka, laakiinse waa labo calaamadood oo ka mid ah calaamooyinka Ilaahay, ee markaad aragtaan kaca oo tukada” (Al-Bukhaari 993)
Salaadda qorrax iyo dayax madoobaadka waa labo rakcadood, waxaase bannaan inuu ku soo celceliyo rukuuca, waayo qofka tukanaya markuu ka soo kaco rukuuca rakcadda koowaad wuxuu ku celiyaa akhrinta faatixada iyo wixii u fududaada akhrinta Qur’aanka, markaasuu misna rukuucayaa oo ka soo kacayaa rukuucda markaasuu sujuudayaa oo fariisanayaa labada sujuud dhexdood tanina waa rakcad dhan, kaddib markuu ka soo kaco sujuudda wuxuu sameynayaa rakcadda labaad waxa uu sameeyey rakcaddii hore.
Ogaanshaha culimda falagga waqtiga qorrax iyo dayax madoobaadka iyo u fasirkooda dhacdadaa si cilmi ah waxay u kordhisaa mu’minka cabsi Ilaahay iyo weyneyntiis, Allahaasoo abuuray nidaamka la yaabka ee koonka, tiridda ileyska qorraxda ama dayaxa waqti yar waa xusuusin xag Ilaahay ah Maalinta Qiyaamaha marka ay isbeddeli doonaan xeerarkaasoo dhammi oo qorraxda ka soo bixi doonta halka ay u dhacdo, markaasna waxaa taga nuurkeeda.